ဂျပန်အစိုးရ၏ အကူအညီဖြင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)မှ ကျောင်းသားများကို နည်းပညာသင်တန်းများ ?? - Yangon Media Group
ဂျပန်အစိုးရ၏ အကူအညီဖြင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)မှ ကျောင်းသားများကို နည်းပညာသင်တန်းများ ??
ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ ကူညီထောက်ပံ့မှု ဖြင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ဂျပန်ကုန်ထုတ် လုပ်မှုနည်းပညာအကြောင်းဆိုင်ရာသင်တန်းကို အခမဲ့ သင်ကြားပို့ချ၍ အလုပ်အကိုင်ရရှိ ရေးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနားအား နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) တွင် နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ပါမောက္ခချုပ်များနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ထိုအစီအစဉ်အား ဂျပန်အစိုးရ၏အကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကာ အာဆီယံ ဂျပန်စီးပွားရေးဝန်ကြီးများနှင့် စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကော်မတီ(AMEICC)၊ ပင်လယ်ရပ်ခြားကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ ( AOTS ဂျပန်ရုံးချုပ်)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ စီစဉ်ကြီးကြပ်ပေးသည့် J-SAT ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ မှ ပူးပေါင်းသင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ”မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကို နည်းလမ်းကျကျ ထိထိရောက်ရောက်ပံ့ပိုး ပေးနိုင်တဲ့သင်တန်းတစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အထူးပဲဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာနည်းပညာတွေအပြင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးပေးသွားမယ်လို့လဲ သိရပါတယ်”ဟု နည်းပညာ တက္ကသိုလ်(သန်လျင်)မှ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါ်သိင်္ဂီက ပြောသည်။
အဆိုပါသင်တန်းတွင် ဂျပန်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့် ဂျပန်ကုမ္ပဏီများတွင် လိုအပ်သော စီးပွားရေးဆိုင်ရာအမူအကျင့်(Business Manner) စသည့်သင်ခန်းစာများကို အခမဲ့ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူပေါင်း ၅ဝဝဝ ခန့်ရှိပြီး ထို အထဲမှ သင်တန်းကာလတစ်ခုလျှင် ၅ဝ ခန့်နှင့် သင်တန်းသုံးခုအတွက် လူဦးရေ ၁၅ဝ ခန့်ကို ခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သည့် ဘာသာရပ်ကြီးကိုးခုအား သင်ကြားလျက်ရှိပြီး ထိုအထဲမှ Mechanical, Electronic, Electrical Power, Mechaltronic စသည့်ဘာသာရပ်များမှ အထူး ပြု ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါသင် တန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဂျပန်နိုင်ငံမှ အထူးတာဝန်ခံပါမောက္ခများက စာတွေ့အပြင် သီလဝါစက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းများတွင်လည်း လက်တွေ့သင်ကြားမှုများပြုလုပ်သွားမည်ဟု သိရသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် သေနတ်သမားက မူလတန်း စာသင်ကျောင်းအတွင်း ဝင်ရောက် ပစ်ခတ်
မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အကူအညီပေးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ-အမေရိကန် နိုင်ငံခြ
စိတ်ရောဂါ ရှိ၊ မရှိ စမ်းသပ်ရန် မိမိအား တောင်းဆိုခြင်းခံခဲ့ရဟု ဒန်နီရို့စ် ဖွင့်ဟ
အိန္ဒိယတွင် ကလေးပြန်ပေးဆွဲသူဟု သံသယရှိသူ ငါးဦးကို ဒေါသထွက်နေသော လူအုပ်ကြီးက သတ်ဖြတ်
စုပ်ခွက်ငါးနှင့် ပတ်သက်သည့် ပြောဆိုရေးသားနေမှုများ မှန်ကန်မှု မရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အလှ